GARBAHAAREEY ONLINE » XOG: Shariif Xasan oo qarash iyo waqti ku bixinaya Qorshe halis ku ah Jawaari + (Warbixin)..
XOG: Shariif Xasan oo qarash iyo waqti ku bixinaya Qorshe halis ku ah Jawaari + (Warbixin)..
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda ololaha ay wadaan Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya iyo tan Gudoonka Baarlamaanka Federaalka oo la filayo in dhawaan ka dhacaan magaalada Muqdisho.
Musharax Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa wada ka miro dhalinta qorshe Siyaasadeed uu ku doonayo in Kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka uu dhinac mariyo Beelaha Digil iyo Mirifle oo sanadihii ugu dambeeyay lagu calaamadeeyay.
Shariif Xasan ayaa wada olole xoogan uu ku doonayo in Kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ku fariisiyo Xildhibaan kasoo jeeda Beesha Daarood gaar ahaan Musharax Cabdirashiid Maxamed Xidig .
Sida aan Wararka ku heleyno Shariif Xasan ayaa bilaabay kasbashada Xildhibaanada Baarlamaanka si ay ugu taageeraan in Kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka loogu doorto Xildhibaan Xidig si uu Shariif Xasan ugu tartamo Kursiga Madaxweynaha Soomaaliya.
Shariif Xasan ayaa kulamo kala duwan uu la yeelanayoXildhibaanada Aqalka hoose ka wada magaalada Muqdisho, waxaana qaar badan oo kamid ah Xildhibaanada uu la kulmau ka dhaa dhiciyay in codkooda ku taageeraan ayna dortaan Xildhibaan Xidig.
Qorshaha Shariif Xasan hadii uu guuleesto uuna Xidig ka dhigo Gudoomiyaha Baarlamaanka waxa uu fursad u heli doonaa in uu u tartamo kursiga Madaxweynaha Soomaaliya , hadii uu tartankaasi ku guul dareesta ayuu hada Beeshiisa la doonayaa in ay hesho jagada R/Wasaaraha .
Musharaxiinta iyo Siyaasiyiinta Beesha Daarood ayaa dhankooda magaalada Muqdisho kawada qorshe iyana lagu fashilinayo mida uu wado Shariif Xasan Sheekh Aadan , waxa ayna wadaan iyana in ay taageeraan in Gudoomiyaha Baarlamaanka kusoo baxo nin kasoo jeeda Beesha Digil iyo Mirifle.
Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka oo la filayo in ay dhacdo 11-ka bishan ayaa noqon doonta tartanka ugu adag ee lagu kala harayo, waxaana Kursigaasi hadii uu kusoo baxo nin kasoo jeeda Beesha Daarood Tartanka Madaxweynaha ka haraya Musharxiinta Beesha Daarood hadiisa Kursigaasi uu kusoo baxo nin kasoo jeeda Digil iyo Mirifle waxaa fashilmaya damaca Shariif Xasan.